भारतको मणिपुरनिवासी पिता रागाइसिन पान्मै र माता अप्यूलिउ पान्मैका चार सन्तान मध्यकी कान्छी छोरी हुन कथाना पान्मै । उनका दुई दाजु र एक दिदी छन् । जन्म भारतमा भए पनि नेपालमै बसेर नेपाल मेडिकल कलेज जोरपार्टीबाट २००१ मा एम बिबि एस गरेकी पान्मैले २०११ मा न्याम्स वीर अस्पतालबाट एम डि ( बलबभकतजभकष्ययिनथ बलम अचष्तष्अब िअबचभ) पूरा गरेको बताइन् । तत्पश्चात उनले भैरहवाको यूनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सबाट १ वषै कोर्स समेत गरेकी बताइन्् ।
२००८ मा काठमाण्डौका डा. प्रजज्वल बस्नेतसंग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए पछि उनको नाउमा बस्नेत थर पनि जोडिएको हो । उनका श्रीमान् हाल गौर आँखा अस्पतालका एमडी छन् । कथानाका दुई सन्तान रहेको उनले बताइन् । काठमाण्डौको वयोधा अस्पताल, मनमोहन टिचिङ्ग हस्पिटल, र वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेज हुँदै हाल डा. कथाना नारायणी वयोधा अस्पतालमा आइ सीयू प्रमुखको रुपमा रहेकी छन् । उनै डा.कथानासँग आइसीयूको सन्दर्भमा गरिएको बिशेष कुराकानी :
आइ सी यू भनेको के हो ?
आइसीयू भनेको सघन उपचार केन्द्र हो । आइ सी यू भनेको जटिल समस्या भएका बिरामीहरु राख्ने अस्पतालको एउटा कक्ष हो । यहाँ जुनसुकै प्रकारका विरामीहरु पनि राखिन्छ । जुन बिरामीलाई सामान्य बेडमा राखेर हुँदैन । निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता बिरामीलाई राख्ने कक्ष नै आइ सी यू कक्ष हो ।
आइ सी यू कस्ता बिरामीहरुलाई राखिन्छ ?
सिकिस्त भएका र बिरामीको अंगहरुमा पनि धेरै रोगका कारणले असरहरु गरिसकेको र ती अंगहरुमा पनि समस्याहरु आएको विशेष गरी ( फोक्सो, मुटु किड्नी) आइ सी यू केयरको आवश्यकता पदर्छ । औषधीहरुसंगै निगरानी, मोनिटरीङ्गको लेबल पनि बढी हुनु पदर्छ । त्यस्ता बिरामीहरुलाई हामीले आइसीयूमा राखेर सघन चिकित्सक र अन्य रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टिम मिलेर बिरामीको उपचार गरेर सकेसम्म राम्रो नतिजा दिन प्रयास हुन्छ । अलिकति गम्भिर रुपकै बिरामीहरु हुन्छन् ती । अलि जटिल भएकै कारणले आ इ सीयूमा राख्दा उहाँहरुको समस्या अलि छिटो समाधान गर्न सकियोस् ।
आइ सी यू मा राखिएको बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ ?
अंगहरुमा र फिजियोलोजिमा के समस्या छ ? छिटो भन्दा छिटो पत्ता लगाउने र छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्ने हुनुपर्छ । त्यो गर्ने भनेकै हामीले मोनिटरहरु प्रयोग गर्छौ । त्यसले चाही बिरामीको केही अवस्थाहरुमा परिवर्तन आएमा छिटो भन्दा छिटो डिटेक्ट गर्ने काम गर्र्छ । वार्डमाभन्दा अलि विशेष रुपमा मोनिटरीङ्ग आयूसीयूमा हुन्छ । अलि सिकिस्त परेको बेलामा बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा पनि राख्नु पर्ने हुनसक्छ । आइसीयूमा राखेको बिरामीहरुको मुटुको चाल, ब्लड प्रेसर जाँच गरिन्छ । कुनै प्यारामिटरहरु मिनेट–मिनेटमा मोनिटरीङ्ग गरिन्छ भने कुनै घण्टा घण्टामा मोनिटरीङ्ग गरिन्छ । त्यो प्यारीमिटरहरुमा कस्तो चेन्ज आयो त्यो अनुशार नै हामीले मोनिटरीङ्ग गर्ने गर्छौं ।
आइ सीयूमा के कस्ता सेवाहरु दिइन्छ ?
चिकित्सकीय विकाससंगै आइ सी यू सेवा पनि स्पेशलाइज हुँदै गइरेहको छ । हामीकहाँ भने मिक्स मेडिकल सर्जिकल आइसियू सेवा उपलब्ध छ । यसमा सबै किसिमका बिरामीलाई राखेर सेवा दिइन्छ । जुन आइसयिूमा हामीले मेडिकलका बिरामी र सल्यक्रियाका बिरामीहरु राख्छौ । आइसीयूको पनि १, २, ३ लेबल हुन्छ । त्यसको वर्गिकरण डाक्टरह कसरी बस्छन्, नर्सहरुको अनुपात के छ । उपकरणहरु कस्ता छन् । भेन्टिलेटर, डायलोसिस मेसिन छ कि छैन् ? यसको आधारमा हुन्छ । हाम्रो नारायणी वयोधा अस्पतालमा लेबल थ्री आइसी यू छ । यहाँ २४ सै घण्टा डाक्टरहरु उपल्ब्ध छन् । टेन्ड नर्सहरु छन् । यी सबै सेवाहरु आइसीयू भित्रै उपलब्ध छ ।
आर्थिक रुपमा सेवाग्राहीलाई आइसीयू कतिको महंगो पर्न जान्छ । सरकारी अस्पतालमा त सरकारले पनि बजेट दिएको हुन्छ सुविधा दिएको हुन्छ । आइसीयू वार्ड ओपिडीभन्दा अलि खर्चिलो नै हुन्छ । सिकिस्त बिरामी हुने भएकोले त्यसै अनुसारको अनुसन्धान अलि बढी गर्नुपर्ने, औषधी पनि अलि कडा महंगो प्रयोग हुन्छ । फेरि वार्डभन्दा आइसीयूमा औषधी पनि अलि धेरै चलाउनु पर्ने हुन्छ । किन भने बिरामीमा धेरै किसिमका रोगहरुले विभिन्न अंगहरुमा असर गरेको हुन्छ । त्यो बाहेक आइसियूमा राखेका बिरामीको रोगले असर गरेको अंगलाई सपोट गर्ने प्रविधिहरुको प्रयोग गरिन्छ ।
जस्तै किड्नीमा असर गरेको कारण पिसाब भएन भने डायलोसिस प्रविधिको प्रयोग हुन्छ । पmोक्सोमा असर गरेको छ भने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सामानहरु चाहिन्छ । यसरी अलि खर्च लाग्ने हुन्छ । तर हामीले काठमाण्डौका अस्पतालले दिने सेवा दिइरहेको छौ । त्यो पनि यहीको लागतमा । हामीले महंगो शुल्क लिएका छैनौ ।
नारायणी वयोधा अस्पालमा रहेको आइसीयू को विशेषता चाही के हो ?
हामी कहाँ मिक्स मेडिकल सर्जिकल आइसियू सेवा उपलब्ध छ । जुन वीरगंजमा अन्य अस्पतालहरुमा छैन । हामीले बिरामीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बिरामीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सेवाको व्यवस्था गरेका छौं । हामीकहाँ टे«ण्ड डाक्टरहरु हुनुहुन्छ । नर्सहरु पनि आइसीयू सम्बन्धी नै ट्रेनिङ्ग लिएका छन् । हाम्रो एउटा टिम नै छ । जसले आइसीयूका बिरामीहरुलाई सेवा दिन २४ सै घण्टा तयार छौ । वीरगंज कै स्वास्थ्य सेवाको दरमा हामीले काठमाण्डौका अस्पतालले दिने सेवा सुविधा दिएका छौ ।
#नारायणी वयोधा अस्पताल #डा कथाना पान्मै
मगलवार, पुष ६, २०७८, ०४:१२:००